Nhau - Nyanzvi Dhizaini China Makore matatu Warranty Smart Kucheka Fiber Laser Metal Cutter muchina
Kubatsira nharaunda yedhorobha diki muCalifornia, METALfx neAdventist Health Howard Memorial Hospital vakabatana panguva yeCOVID-19 denda. Getty Images
Hupenyu muWillitz, California hwakafanana nehupenyu mune chero dhorobha diki riri kure muUnited States. Chero ani asiri nhengo yemhuri anenge akaita senhengo yemhuri, nekuti iwe unogona kuvaziva zvakanyanya.
Willits idhorobha diki rine vanhu vangangosvika zviuru zvishanu riri pakati peMendocino County, ingangoita maawa maviri nekutyaira kuchamhembe kweSan Francisco. Rine zvakawanda zvezvinodikanwa zvehupenyu hwako, asi kana uchida kuenda kuCostco, unofanirwa famba mamaira makumi maviri kumaodzanyemba uchitevedza US Highway 101 kuenda kuUkia, guta guru rine vagari vemo 16,000.
METALfx jira rine vashandi zana nemakumi manomwe nevatanhatu, uye Adventist Health Howard Memorial Hospital ndivo vashandirwi vakuru vaviri mudunhu iri. Munguva yeCOVID-19 denda, vakaitawo basa rakakosha mukubatsira nharaunda nekubatsirana.
METALfx yakavambwa muna 1976. Muroller coaster of market dynamics, machira akawanda ane tenures akafanana akafanana.Mukutanga 1990s, kambani yakawana mari yegore negore ye60 mamiriyoni emadhora ekuAmerica uye yakashandisa vashandi vangangosvika mazana mana.Zvisinei, panguva dzakafanana. nguva, apo mutengi mukuru akasarudza kutamisa mabasa ayo okugadzira mhiri kwemakungwa, kambani yakaderera uye vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa avo.Dhipatimendi rose rakaparadzwa.Kumwero wakati, kambani yaifanira kutanga zvakare.
Kwemakore akawanda, METALfx yave ichishanda nesimba kuti idzivirire mamiriro ezvinhu aya.Iye zvino, mutemo wegoridhe wekambani ndewokuti hapana mutengi mumwe chete anogona kuverenga mari inopfuura 15% yemari yekambani.Chiratidziro muimba yemusangano chinonyatsoratidza izvi, izvo zvinoratidza vatengi vekambani gumi.METALfx vashandi havazivi chete kuti vari kushandira ani, asiwo vanoziva kuti ramangwana rekambani harina kusarudzwa nehofori imwe chete kana mbiri.
Iyo inogadzira inopa vatengi vayo mainjiniya, kugadzirisa uye kugadzira masevhisi, anosanganisira laser kucheka, kutsika, kutsika, kubhenda muchina kubhenda, uye gasi simbi arc uye gasi tungsten arc welding.Inopawo masevhisi egungano, senge matching uye sub-assembly kuvaka. METALfx bhizinesi rekusimudzira uye kushambadzira director Connie Bates akataura kuti pendi uye poda yekupotera mutsara wakashongedzerwa neakawanda-nhanho pretreatment mutsara uye zvakare yakaratidza kuve inofarirwa nevatengi vari kutsvaga chitoro chekumira-chimwe kuti vape zvikamu zvakaumbwa uye zvakapedzwa.
Bates akati masevhisi aya uye zvimwe zvigadzirwa zvakakosha, sekuunza-nguva uye kugadzira basa rekugadzira, zvakabatsira kuvaka mugadziri wevatengi portfolio mumakore achangopfuura.
Kukura uku kunoperekedzwa nevatengi venguva refu, vamwe vacho vanodzokera makore makumi maviri nemashanu, uye vamwe vatengi vatsva.METALfx yakawana mutengi mukuru munharaunda yekufambisa mwedzi mishoma yapfuura, uye yakabva yakura kuva mumwe wevatengi vayo vakuru. .
"Tine 55 zvikamu zvitsva zvinowira pamusoro pedu mumwedzi," akadaro Bates.METALfx akagumburwa zvishoma achiedza kubata mabasa ose matsva, asi mutengi aitarisira kunonoka mukupindura, achibvuma kuti akaisa mari yakawanda yebasa mumucheka. panguva, Bates akawedzera.
Mukutanga kwechirimo cha2020, mugadziri akaisa mutsva weBystronic BySmart 6 kW fiber laser yekucheka muchina, wakabatana kune otomatiki chengetedzo uye shongwe yekudzoreredza uye neByTrans Cross zvinhu zvekubata system kuti ienderane nekumhanya kwakanyanya kwefiber laser. .Bates akati iyo itsva Laser ichabatsira kambani kusangana nevatengi 'ipfupi nguva dzekutumira, kucheka kashanu nekukurumidza kupfuura 4 kW CO2 laser yekucheka muchina, uye kugadzira zvikamu zvine micheto yakachena.(Fiber lasers inozopedzisira yatsiva maviri emakambani matatu CO2 Laser yekucheka michina. Imwe ichachengeterwa prototype/yekukurumidza kuchinja mayunitsi.) Iko kushomeka kwesimba rekushandisa kwelaser yekucheka michina yakanyatsokodzera kambani, akawedzera, nekuda kwedunhu Pacific Gas & Energy mutengesi wemagetsi anofarira zvikuru kuderedza. grid kudiwa, kunyanya kana pakaitika njodzi dzinongoitika dzoga (sekupisa kwemasango pedyo gore rapfuura).
METALfx manejimendi akagovera CCIDID-19 ekuchengetedza hupenyu kuvashandi muna Chivabvu kuti vatende nekuenda kubasa, senzira yekutsigira mabhizinesi emuno. Muchikamu chega chega cheCCIDID-19 chekupona, vanogamuchira vakawana masiki, machira ekuchenesa uye zvitupa zvechipo kubva munharaunda. restaurants.
METALfx yakawana zvakawanda zvakanaka mukutanga kwegore rino, nekuwedzera kunosvika gumi nemaviri% zvichienzaniswa nenguva yakafanana muna 2019. Asi nedambudziko rekupindura COVID-19. hazvizoregi.
Sezvo California inotanga kupindura Kurume coronavirus kubuda, METALfx iri kuyedza kufunga kuti zvichafamba sei.Pamwe pakutaura nezve pekugara-in-nzvimbo maodha mumatunhu eNorth California, mumwe wevatengi vepamusoro veMETALfx akaibata kuti ataure kuti mugadziri akakosha. kune bhizimusi rayo.Mutengi mugadziri wemichina yekuongorora mishonga, zvimwe zvinhu zvayo zvinoshandiswa kurwisa coronavirus.Bates akawedzera kuti mumazuva mashoma akatevera, mumwe mutengi akabva abata chitoro ichi akati zvinhu zvavo zvakakoshawo.METALfx haisi kuzovharwa panguva yedenda iri.
"Tiri kuyedza kufunga zvatinofanira kuita," akadaro Henry Moss, mutungamiri weMETALfx." Ndakatarisa kuAmazon ndikashaya bhuku remafambisirwo ekambani panguva yedenda.handisati ndanyora.
Kuti aite chisarudzo chakarurama chokudzivirira vashandi uye kuita kuti kambani izadzise misengwa yayo yokugovera zvinhu, Moss akaonana neAdventist Health Howard Memorial yaiva pedyo. mutengesi panguva iyoyo uye muridzi wekupedzisira webhiza remujaho rakakurumbira Seabiscuit.Nheyo yacho yakavakirwa pamwanakomana waHoward Akatumidzwa zita raFrank R. Howard (Frank R. Howard), akafira mutsaona yemotokari.) Chipatara chakapindura nokukurumidza.METALfx manejimendi akasangana nevatungamiriri vaviri vezvokurapa vechipatara kuti vanzwisise kuti ndeapi matanho avaitora kuti vazvionere ivo panguva ino Kuchengetedzeka uye hutano hwevashandi.
Vashandi vanotarisa tembiricha yemuviri wavo vasati vapinda munzvimbo iyi kuti vaone kuti vangave nefivha here. Vanobvunzwawo mazuva ese kana vari kuratidza chero zviratidzo zvine chekuita nekoronavirus. Matanho ekutangisa nharaunda aripo. Pamusoro pezvo, kana vashandi vabatwa nechirwere ichi. iyo coronavirus, hupenyu hwavo hunogona kutyisidzirwa, uye vashandi vanosangana nemamiriro avo ekurapa vanorairwawo kuti vagare pamba. Moss akati matanho ekudzivirira mazhinji akatorwa mavhiki pamberi pegwaro repamutemo rakapihwa nehurumende nehurumende.
Nezvivakwa zvechikoro zvakavharwa uye kudzidzisa kwakashanduka kuita nyika chaiyo, vabereki vakangoerekana vanetsekana nekuchengeta vana masikati.
Kufadza chero nyanzvi yekugadzira yakaonda, METALfx inoshandisa maturusi ekuona zviratidzo kune yayo COVID-19 kudzivirira chirongwa. iyo.Kana iri yeblue sticker zuva uye mushandi anotarisa kuti hapana fivha uye zviratidzo, iye achawana yebhuruu sticker.
“Kana kunze kwakanaka uye maneja akaona munhu ane chitupa cheyero, maneja anofanira kusimudza munhu iyeye,” akadaro Bates.
Nenguva ino, METALfx ichave nemukana wekudzorera kune vavanoshanda navo muchipatara.Nekupararira kwekoronavirus uye vanhu vachiona kuti vashandi vepamberi vekurapa havana midziyo yekuzvidzivirira (PPE), METALfx manejimendi akaziva kuti vane Masikirwo anokwana eN95 masks, ayo anonyanya kushandiswa nevashandi vane chekuita nekubvisa.Bates vakati vakafunga kubata vatariri vechipatara kuti vavape mamasks eN95. masikisi ebhuruu nemachena ayo zvino akajairika munzvimbo dzemukati.
Henry Moss, Mutungamiriri weMETALfx, akasimudza mapepa maviri echimbuzi, uye timu yakabatsira kuunganidza 170 COVID-19 kits yekupona.
METALfx yakadzidzawo nezvemukana wekubatsira Frank R. Howard Foundation, sangano risingaite purofiti rakazvipira kutsigira kugadzikana uye kusimukira kwezvipatara uye kushandira nharaunda yeWillits.Nheyo iyi iri kuronga kugoverwa kwezviuru zvemachira emachira anogadzirwa nevasona veko. uye vanofarira kunharaunda.Zvisinei, masiki aya haapi maski esimbi yemhino yakavharika yakatenderedza mhino, zvichiita kuti zvive nyore kuchengeta mask iri panzvimbo uye kuita kuti ishande sechipingamupinyi kudzivirira kugovana kwemadonhwe econavirus kana kufema. wavo.
Vashandi vanobatanidzwa mubasa rekugovera masiki vakaedza kugadzira masiki aya esimbi nasal masks, asi zviri pachena kuti izvi hazvina kunyatsoshanda.Moss akati mumwe munhu akakurudzira METALfx senzira yekutsvaga nzira iri nani yekugadzira zvimedu zviduku zvesimbi, saka boka raive inodaidzwa kuidzidza.Zvinoitika kuti kambani ine chidhindo chemudziyo chinogona kuburitsa chimiro cheovha chinoda kufanana nechimiro chaidiwa, uye ine aluminium paruoko kugadzira zambuko remhuno.Nerubatsiro rwechimwe che iyo Amada Vipros turret punch presses, METALfx yakagadzira 9,000 mabhiriji emhino mune imwe masikati.
"Unogona kuenda kune chero chitoro mutaundi izvozvi, uye chero munhu anovada anogona kuzvitenga," Moss akadaro.
Nekudaro, zvese izvi zvichienderera mberi, METALfx ichiri kugadzira zvikamu zvevatengi vayo vakuru.Bates vakati nekuda kwekuburitswa kwenhau nezvedenda uye kusanzwisisa kwakawanda kwehutachiona nemhedzisiro yahwo, vanhu vari kunetsekana zvishoma nezvebasa ravo panguva. nguva ino.
Ipapo kwakauya kurasikirwa kwepepa rechimbuzi, iro rakatsvaira masherufu ezvitoro zvakawanda.” Zvose izvi zvakandirwadza,” Moss akadaro.
Kambani yakasimbisa nevashambadziri vezvigadzirwa zvemaindasitiri kuti ichiri kukwanisa kuendesa mapepa emuchimbuzi. Naizvozvo, Moss akafunga kuti zvingave zvinonakidza kugovera zvigadzirwa zvemapepa zvaitsvakwa zvikuru nevanoshanda nesimba vechikwata.
Asi zvakare panguva ino, vanhu vari kusundidzira vagari venzvimbo yeWilits kuti vatsigire mabhizinesi mudhorobha. Mushure mekunge hurongwa hwekupotera hwatanga kushanda, vanhu havachashandisi mari muzvitoro nemaresitorendi.
Musi waChivabvu 1, Mendocino County yakapa ruzhinji kurongeka kwaida kuti vagari vapfeke masiki panguva yekudyidzana kweveruzhinji.
Zvese izvi zvinhu zvaita kuti METALfx manejimendi timu igadzire COVID-19 yekupona kit yevashandi vayo.Ine maroll maviri emapepa echimbuzi;masks matatu (N95 mask, mask yejira, uye kaviri jira mask inogona kubata sefa);uye chitupa chechipo cheresitorendi yeWillett.
“Zvese ndezvekusava nehanya,” Moss akadaro.” Patakagovera midziyo yacho, taisagona kuita misangano mikuru, naizvozvo takafamba-famba ndokugovera zvinhu izvi.Pandakabudisa bepa rechimbuzi paseti imwe neimwe, munhu wose akaseka uye manzwiro angu akanga anyevenuka zvikuru.”
Hapana anoziva zvichaitika mune ramangwana, asi vazhinji vanogadzira vari kugadzirira kuti vatengi vatangezve kugadzira uye kuwedzera zvikamu zvemirairo.METALfx hazvisi izvo.
Moss akati matanho akadai sekugadziridza dhipatimendi remusangano, kupeta kaviri kugona kwepoda coating line, uye kuwedzera michina mitsva yekucheka laser inoisa munzvimbo yakanaka yekutarisana neiyo rebound muindasitiri yekugadzira. zvimwe midziyo yekubvumira zvimwe zvakarongeka zvikamu kuyerera zvichabatsirawo.
"Takabata uye tasundidzira basa rakakura," Moss akadaro. "Takagadzirira kugamuchira mikana mitsva."
Kambani iyi yedhorobha diki ine zvirongwa zvakakura zveramangwana.Idzi inhau dzakanaka kune vashandi veMETALfx uye vagari veWillits.
Dan Davis ndiye mupepeti-mukuru weThe FABRICATOR, magazini yeindasitiri inonyanya kufambiswa nekugadzirwa kwesimbi nekugadzira, uye zvinyorwa zvehanzvadzi yayo STAMPING Journal, The Tube & Pipe Journal, uye The Welder. Anga achishanda pazvinyorwa izvi kubva muna Kubvumbi. 2002.
Kwemakore anopfuura 20, akanyora zvinyorwa pamusoro pemaitiro ekugadzirwa kweAmerica uye nyaya.Asati abatana neThe FABRICATOR, aibatanidzwa mukugadzirwa kwemidziyo yepamba, kupedza indasitiri, kugadzira uye kugadzirwa kwesoftware.Semupepeti wemagazini yekutengeserana, akafamba zvakanyanya United States neEurope, kushanyira zvivako zvekugadzira uye kutora chikamu muzviitiko zvakakosha zvekugadzira munyika.
Aive akapedza kudzidza paLouisiana State University aine dhigirii rekutora nhau muna 1990. Anogara muCrystal Lake, Illinois nemukadzi wake nevana vaviri.
FABRICATOR ndiyo magazini inotungamira kuNorth America simbi yekugadzira nekugadzira indasitiri.Magazini inopa nhau, zvinyorwa zvehunyanzvi uye nhoroondo dzenyaya kuitira kuti vagadziri vapedze basa ravo nemazvo.FABRICATOR yagara ichishandira indasitiri kubva 1970.
Iye zvino unokwanisa kuwana zvizere dhijitari yeThe FABRICATOR uye nyore kuwana zvakakosha zveindasitiri zviwanikwa.
Zviwanikwa zveindasitiri zvakakosha zvino zvinogona kuwanikwa zviri nyore kuburikidza nekuwana kuzere kudhijitari vhezheni yeThe Tube & Pipe Journal.
Nakidzwa nekuwana kuzere kudhijitari ye STAMPING Journal, iyo inopa kufambira mberi kwetekinoroji, maitiro epamusoro uye nhau dzeindasitiri yemusika wesimbi.
Nakidzwa nekuwana kuzere kune dhijitari vhezheni yeThe Additive Report uye dzidza mashandisiro ekuwedzera ekugadzira tekinoroji kuti uwedzere kushanda zvakanaka uye kugadzirisa iyo yepasi.
Iye zvino unokwanisa kuwana zvizere shanduro yedhijitari yeThe Fabricator en Español, kuwana zviri nyore zviwanikwa zveindasitiri.
Sheet Metal Laser Cutter, Laser Cnc Machine, Automatic Laser Welder, Zvishongo Welder, Carbon Fiber Laser Cutter, Laser Cnc Machine Kutengeswa,